सुरेशकुमारीको सयपत्री सपना - Tuwachung.com Tuwachung.com
१. हलेसीमा राखिएको ‘पिपुल काउन्टिङ मेसिन’ले यस्तो काम गर्ने
२. वर्ष ६०, कक्षा १
३. अप्पर सोलुको आईपीओ सर्वसाधारणलाई आउँदै
४. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रवक्तामा गिरी
५. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
६. फिचर लेख्न खोज्नेलाई वरिष्ठ पत्रकार मोहन मैनालीका ‘टिप्स’
७. ५० वर्षअघि ‘आदिवासी’ शब्द लेख्ने थुलुङ
८. निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले ५ हजार घुस लिएको प्रमाणित
९. पिल्मो राईहरू भ्रममा नपरौं, अरूले पनि यथार्थ स्वीकारौं
१०. विदेशीको शव बोकेरै ल्याइने, नेपालीको त्यतै फालिने
११. भाषा अर्थात् सञ्चार माध्यम
१२. पत्रकारको हैसियत र गर्नैपर्ने काम
दीपेन्द्र राई/सयन्द्र राई	२०७८ बैशाख ३०, १२:२५
‘सुरुको वर्ष ?,’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ डाँडागुठकी सुरेशकुमारी राईले सुनाइन्, ‘पाँच सय लगानी गरेर दुई सय रुपैयाँ कमाएँ ।’ त्यति भनिसकेपछि राई मज्जाले हाँसिन् । सयपत्री फूलको बीचमा उभिएर हाँसेकी उनको हाँसो लोभलाग्दो देखिन्थ्यो ।
सयपत्री फूलको खेती थालेको दुई वर्ष भयो । ६६ वर्षीया राईले सुरुको वर्ष पाँच सय रुपैयाँमा सयपत्री फूलको बिरुवा किनिन् । प्रतिबोट १० रुपैयाँमा किनेर रोपेको सयपत्री फुलेपछि दुई सय रुपैयाँको माला बेचिन् । लगानी त उठेन–उठेन, सयपत्री फुलाउँदा गरेको परिश्रम व्यर्थै भयो । तर, उनले हरेश खाइनन् । साउनमा फुलेको भए दुई/चार पैसा बढी हात पथ्र्यो । बेमौसमा सयपत्री फुलेपछि ग्राहकको माग आएन ।
तर पनि, खेतीले निरन्तरता पाएकै छ । ‘यसपटक एक हजार दुई सय रुपैयाँको माला बेचिसकेकी छु,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘बोलबमको अवसर पारेर हलेसी आउने श्रद्धालु थुप्रै छन् । त्यतिबेला अलि धेरै माग होला कि ।’
आशाले मानिसलाई जिउन सिकाउँछ । उनले पनि बोलबममा फूल बिक्री हुने आशा गरेकी छन् । उनको आशा निराशामा परिणत हुने छैन । गाउँमा अरूले पनि सयपत्री फूलको खेती थालेका छन् । तर, सुरेशकुमारी राईको खेती उदाहरणीय बनेको छ ।
‘लगानी ?,’ उनले थपिन्, ‘सयपत्री फूल खेतीका लागि लगानी खासै छैन । तर, मिहिनेतको हिसाब–किताब शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । बिहान बेलुका गरी दैनिक चार घन्टा फूलमा पानी लगाउँछु । गोडमेल गर्छु । लगानीभन्दा परिश्रम धेरै गरेकी छु ।’
चैतमा बीउ राखेर वैशाखमा सारेको सयपत्री यतिबेला रहरलाग्दो फुलेको छ । टनेलभित्र र बाहिर फुलेको सयपत्री देख्दा जोकोहीलाई यही खेती गरौं–गरौं लाग्दोरहेछ । त्यसो त सुरेशकुमारी राई पनि कम्ती खुसी छैनन् । ‘बगैंचामा पुगेपछि खुसी हुने कारण चाहिँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘फूलैफूलको बीचमा उभिँदा बिक्री नभए पनि फूल खेतीमै रमाउन मन लाग्छ ।’
व्यापार अपार भन्ने नेपाली भनाइ छ । उनले घाटाको व्यापार गरिरहेकी छन् । तर, भोलिको आशामा उनले फूल खेतीलाई निरन्तरता दिँदै आएकी हुन् । फूल खेती गरेरै खान, लगाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छैन । परम्परागत रूपमा खेतिकिसान गर्दै आएकी उनलाई फूलखेतीले जाँगरिलो बनाएकै छ ।
डाँडागुठमा उनीजस्तै थुप्रैले सयपत्री फूलको खेती थालेका छन् । त्यसमध्ये सुरेशकुमारीको फूल खेती फस्टाएको छ । फूल खेतीमा लाग्नेहरूले हरेश खाएका छैनन् । उनीहरूबीच भेटघाट हुँदा ‘यसपटक त भएन–भएन, अर्को वर्ष त केही न होला नि’ भनेर सान्त्वनाको मलहमपट्टी लगाउँछन् ।
सयपत्री फुलाउन चार महिनामा लाग्छ । चैतमा बीउ राखेर वैशाखमा सार्नेहरूकहाँ हिजोआज सयपत्री फुलिरहेका छन् । अलि ढिलो फुलाउनुपर्ने बाध्यता भए सयपत्रीको मुन्टा चिमोटेर फाल्दिनुपर्छ ।
‘एक माला सयपत्री फूलको एक सय रुपैयाँ लिने गरेकी छु,’ उनले जानकारी गराइन्, ‘एक बोटमा २० वटाजति फूल फुल्छ । दुई बोटको सयपत्री फूलबाट एक माला तयार हुन्छ ।’ सुरेशकुमारी राईले टनेल र टनेलबाहिर पनि सयपत्री फुलाएकी छन् । टनेलभित्र फुलेको सयपत्रीको छेउछेउमा गोलभेंडासमेत रहरलाग्दो फलेका छन् ।
अहिले फुलिरहेको सयपत्री भदौमा मर्छ । त्यसपछि घरायसी सयपत्री फूल रोप्ने उनले योजना बनाइसकेकी छन् । अहिले फुलेको सयपत्री कृषिको हो, जुन मज्जाले फुल्छ भने घरायसी त्यत्ति नफुल्दोरहेछ ।
सुरेशकुमारी राईले गरेको फूल खेती हेर्न हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला राई डाँडागुठ पुगेकी थिइन् । आफूले गरेको खेती हेर्न नगर उपप्रमुख राईलाई आफ्नै आँगनमा स्वागत गर्न पाउँदा सुरेशकुमारी त्यत्तिकै पुलकित छिन् ।
सयपत्री नेपालकै प्रसिद्ध फूलहरूमध्ये एक हो । नेपालमा यसको खेती १७औं शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि सुरु भएको नीलतन्त्र नामक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
(तुवाचुङ वर्ष–२, अंक–१, २०७७ बाट)
अप्पर सोलुको आईपीओ सर्वसाधारणलाई आउँदै
काठमाडौं । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ
सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार ५००
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा बुुधबार छापावाल सुनको मूल्य एकैदिन प्रतितोला २ हजार ५०० ले बढेर
माइजोगमाई गाउँपालिकाका जितेन्द्र अधिकारीलाई आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिलेन । कहिले कता, कहिले कता ।
दूध बेचेरै डेढ करोड
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–३ की मन्दिरा बर्तौलाले दूध बेचेर एक वर्षमासात लाख कमाए । बर्तौलाले आफूले
हलेसीमा राखिएको ‘पिपुल काउन्टिङ मेसिन’ले यस्तो काम गर्ने
हलेसी (खोटाङ) । सालिन्दा हलेसीमा कति भक्तजन आउलान् ? कसैले सोधिहालेमा अन्दाजका भरमा भन्नुपर्ने बाध्यता
वर्ष ६०, कक्षा १
पढ्नका लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण जिल्लाकी एक महिला बनेकी छन् । मोदी गाउँपालिका–८
समृद्ध सञ्चार प्रालिद्वारा प्रकाशित : सम्पादक : दीपेन्द्र राई सहसम्पादक : असल चरित्र